Halkan waxaa ah Metrobus cusub ..! Ekrem İmamoğlu Tijaabiyay | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulHalkan waxaa ah Metrobus cusub ..! Waxaa la tijaabiyay Ekrem İmamoğlu
19 / 11 / 2019 34 Istanbul, SAWIRADA, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, Gobolka Marmara, Metrobus, TURKEY
istrem metrobus ekrem imamoglu waa la tijaabiyay
Halkan waxaa ah Metrobus cusub ..! Waxaa la tijaabiyay Ekrem İmamoğlu; Madaxweynaha EkBB Ekrem İmamoğlu wuxuu ka qeybqaatay tijaabinta baabuurta metrobus ee maxalliga ah. Imamoglu, oo muddo dheer ka soo socday xayndaabka 29, ayaa ka hadlay gaariga waxsoosaarka gudaha ee ay damacsan yihiin inay iibsadaan. Tani waa waxoogaa maalgashi soo daahday. Waxaan dooneynaa inaan dhaqso u dhaqaaqno. Waxaan gaari doonaa go'aanka saxda ah. Waxaan hubin doonnaa in Metrobus ay noqoto meel aamin ah, raaxo badan oo si dhaqsi leh gaadiid leh.
Duqa Magaalada Istanbul (IMM) Madaxweynaha Ekrem Imamoglu, baska wax soo saarka maxalliga ah ee la qorsheeyay in lagu daro gawaarida metrobus ee shirkadda, Beylikdüzü TÜYAP iyo Edirnekapı ayaa ka qeybqaatay tijaabada. Imamoglu waxaa wehelinayay CHP Istanbul kuxigeenka Ozgur Karabat, Kuxigeenka Xoghayaha Guud ee IOM Orhan Demir, La Taliyaha Madaxweynaha IMM ee Murat Ongun iyo Maareeyaha Guud ee IETT Hamdi Alper Kolukisa. Ka helitaanka macluumaad farsamo oo ku saabsan gaariga saraakiisha shirkadda iyo Kolukısa İmamoğlu, oo loogu talagalay inay ahaadaan qayb madaxbanaan oo rakaab ah oo ku jirta qolka darawalka laga helay guriga. Wadarta guud ee muwaadiniinta ku sugan gaariga 28 ayaa joogsanaya Imamoglu'nu qaar, gacmahooda ku salaamaya Madaxweynaha IMM.
BİR LACAG LA'AANTA ”
İmamoğlu wuxuu sameeyay qiimayntiisii ​​ugu horreysay ee baaritaankiisii ​​ku aadan gaariga baaritaanka. Miyaan tijaabinaynaa gaari metrobus ah oo loogu talagalay faa'idooyinkiisa. Gawaarida 'Metrobus' oo leh awood sare, oo aan u aragno inaan soo iibsaneyno, waa gaadiid ballaadhan oo ballaadhan oo bixin kara soo-dejin iyo fuullimaad labada dhinacba istaagaan. Sidaa daraadeed, waxaa jira qeexitaan hanaan oo ka hortagi doona isu soo uruurinta oo qaadi doona rakaab badan oo wata gaadiid yar. Asxaabteyda waxay sameynayaan tijaabadooda imtixaanka ku dhawaad ​​bil. Waxay rabeen nooc tijaabo ah aniga. Waxaan sameyn doonaa baaritaankeena laga bilaabo Beylikdüzü ilaa Edirnekapı. Si wada jir ah ayaan u kormeeri doonnaa waxqabadka gaariga. Gaariga dareewalka ayaa waliba ka aamin badan sida qol gaar ah. Nooca gawaarida ee loogu talagalay in lagu buuxiyo baahi kasta. Dabcan, gawaaridu waxyar buu da 'yaraa. Tani waa waxoogaa maalgashi soo daahday. Waxaan dooneynaa inaan dhaqso u dhaqaaqno. Waxaan gaari doonaa go'aanka saxda ah. Waxaan hubin doonnaa in Metrobus ay noqoto meel aamin ah, ka raaxo badan oo gaadiid dhaqsi leh.
Gawaarida tijaabada ah ee laga soo saaray Bursa İnegöl waxay leedahay matoorka mashiinka naaftada ee 510. Naqshadeeyey laba kursi oo fadhida, 29. Wadarta guud ee awoodda rakaabka ee 291 ee labada dhinac ee gaariga waxay leedahay degganaan iyo albaab albaab ah. Waxaa jira guntin wadareedyo naafa ah oo loo yaqaan '4 curyaan' dhinaca midig iyo bidix ee gaariga. Tiro badan oo ka mid ah dekedaha USB ayaa loogu talagalay gaariga, iyadoo lagu kala saarayo darawalka iyo rakaabka qol madax banaan. Qolka, kaas oo loogu talagalay baahiyaha aasaasiga ah ee wadayaasha, wuxuu leeyahay nidaam kuleyl iyo qaboojin ka madaxbannaan gaariga.
Ekrem Imamoglu, wuxuu siiyey tilmaamo lagu dhimayo
Marmaray ayaa ka dhaqaaqday Ekrem İmamoğlu
Gawaarida Tijaabada ah ee Imamoğlu Imtaxaanka Marki Labaad: 'Xalka asalka ahi waa metro'
Imtixaanka Pre-heating-Brake-Test-Transformer Test-Boji Xarumaha Baadhitaanka Mashruuca Mashruuca Baabuurta rakaabka ah
Mistoolad Metrobus ayaa tijaabiyey metrobus ee Istanbul waxaana laga helay qaar ka mid ah maqnaanshaha
İmamoğlu: 'Waxaan lahaan doonnaa Khadad Cusub'
Duqa magaalada Celik ayaa tijaabiyay gawaarida nidaamka cusub
Ekrem Çetin Mahallesi Meelaha Asphalt
Ekrem Çelebi oo ka soo horjeesatay wadiiqada tareenka Ağrı
Ekrem İmamoğlu Tijaabisay Metrobus
gaadhiga metrobus wax soo saarka gudaha